Nayakhabar.com: टुट्यो नायिका नीता ढुंगाना र नायक आमेश भण्डारीको प्रेम सम्बन्ध , ४ वर्षपछि किन छाडे आमेशले नीतालाई ?
टुट्यो नायिका नीता ढुंगाना र नायक आमेश भण्डारीको प्रेम सम्बन्ध , ४ वर्षपछि किन छाडे आमेशले नीतालाई ?
काठमाडौं । दुई महिना अघिसम्म एक–अर्काबिनाको जीवन कल्पनासमेत गर्न नसक्ने एउटा जोडी यतिबेला एक–अर्काको अनुहार नै हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । केही घण्टा भेट नहुँदा पानीबिनाको माछाझैँ हुने यो जोडी विगत दुई महिनादेखि न त कुनै सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ, न त एक–अर्काले एसएमएसबाट एक–अर्काको जानकारी लिने प्रयास गरेको छ ।
कतिसम्म भने, लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत नीता र आमेश ‘फ्रेन्ड’ छैनन् । ब्रेकअप नहुँदै सामान्य भनाभनका क्रममा नीताले आमेशलाई फेसबुकमा अनफ्रेन्ड गरेकी थिइन् । आमेशले पनि उनलाई ुअनफ्रेन्डु गरिदिए । लगत्तै दुवैले एक–अर्कालाई ‘ब्लक’ गरेपछि प्रेम सम्बन्धमै रहेका बेला पुनस् फ्रेन्डसिप गर्न खोज्दा फेसबुकले त्यसो गर्न नमिल्ने बताइदियो ।